हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ?
Khabar house | २१ माघ २०७७, बुधबार ०१:४९ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : विसं. २०७७ साल माघ २१ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२१ फेब्रुवरी ०३ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४२ । माघ कृष्ण पक्ष । तिथि–षष्ठी, २२ घडी ५७ पला, बेलुकी ०४ बजेर ०३ मिनेट उप्रान्त सप्तमी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ५१ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ४४ मिनेट । दिनमान २७ घडी १३ पला ।
मेष : साझेदारी व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । पर्यटन सम्बन्धि व्यवसायमा सामान्य चहलपल हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रे’म तथा पति प’त्नी बीचको स’म्बन्धको गाँ’ठो क’सिलो भएर जानेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडि पारिनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना निकै बलियो रहेको छ । साथीभाइ तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
वृष: बिहानको समय राम्रो रहेकोले सन्तान तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग पाईने योग रहेको छ।मन परेको मानिसबाट उपहार प्राप्तीको योग रहेको छ। मध्यान्हबाट व्यापार व्यावसायमा लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आर्थिक रुपमा कमजोर भएको महसुस हुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्या आउने तथा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईंको पक्षमा नआउने हुनाले आजको दिन कुनै पनि विवादमा सामेल नहुनु होला ।
मिथुन : पढाइ लेखाइमा सुक्ष्म तरिकाले गरिएको अध्ययनले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिनेछ । खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रबाट आउने आम्दानीले आर्थिक अवस्था मजबुत हुने छ । आफ्नो मानिसबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । प्रे’ममा एक अर्कालाई विश्वास गर्न सकिने हुनाले आत्मियता बढेर जानेछ । सन्तान पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग तथा सल्लाह पाइने तथा वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ ।
कर्कट : बिहानको समय राम्रो रहेकोले माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहने छ । छोटो दुरीको व्यावसायिक यात्रा तय गर्न सकिने छ भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्ने आँट आउने छ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले अरुकै लहैलहैमा लागेर आफ्नो सं’स्कार भुल्दा पछि गएर पछुतो हुने ग्रहयोग रहेको छ । खानपान तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धि स’मस्या आउन सक्छ ।
सिंह : बिहानको समय राम्रो रहेकोले लेखन कलाको माध्ययमले आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । पढ्न लेख्न मन लाग्नेछ भने नतिजा तपाईं आफ्नै पक्षमा पार्न सक्नु हुने छ । मध्यान्हबाट माया प्रेममा सानो कुराले मन मु’टाव सिर्जना हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्या आउनेछ । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला, क’ष्टकर नहोला भन्न सकिन्न ।
कन्या : व्यापार व्यावसायमा बढोत्तरीको योग रहेको छ भने आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला हुनेछन् । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बहरुको सहयोग तथा समर्थन रहने हुनाले नौलो प्रकृतिको काम गर्न जाँगर चल्नेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ भने थोरै बोलेर प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ ।
तुला : काम गरी अरुलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ भने समाजमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । अध्ययनमा प्रगती हुनेछ भने अरुलाई पछी पार्दै नतिजा आफैंतिर ल्याउन सकिनेछ । राजनीति गर्नेहरुले राज्यबाट पद पाउने समय रहेको छ । विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत् अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ । आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरु फेला पार्न सकिने तथा व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ । बिहानको समयमा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
वृश्चिक : बिहानको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । माया प्रे’मको ब’न्धन कसिलो हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन सुखी हुनेछ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुने छ । खनिज पदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जस्तै धा’तु तथा पानीसँग सम्बन्धित वस्तुहरुको कारोबारबाट फाईदा हुनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । मध्यान्हबाट लामो दुरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहनेछ ।
धनु : आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट भने जस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहने छ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हु नेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ । बिद्यामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैंतिर ल्याउन सकिनेछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत् मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
मकर : राज्यबाट अनावश्यक झै झमेला भोग्नु पर्नेछ भने सेवा प्रवाह गर्नेहरुले तपाईंको काम समयमा नगर्दिनाले महत्वपूर्ण उपलब्धि गु’म्न सक्छ । व्यापार व्यावसाय ख’स्केर जानेछ भने आम्दानीका स्रोतहरु साँघुरा भएर जाने छन् । अध्ययन अध्यापनमा मन नजाने हुनाले उपलब्धि अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । माया प्रे’ममा सामान्य अविश्वास सिर्जना हुने योग रहेको छ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले खोजीमुलक क्षेत्रमा रुची बढ्ने तथा पढाइ लेखाइकै सिलसिलामा लामो दुरीको यात्रा हुनेछ ।
कुम्भ : ध’र्म, संस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ। पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ। सामाजिक काम गरी पुरस्कृत हुने योग रहेको छ। साथीभाइ तथा आफन्तहरुको सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ भने नयाँ काम गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग वि’वाद हुने योग रहेको छ ।
मीन : सानातिना घरेलु समस्याहरुले सताउनेछ भने सानो काम सम्पादन गर्न पनि दिनभर समय लाग्नेछ । समयले साथ नदिँदा हुनै लागेको कामहरु बिग्रने तथा अरुकै पोल्टोमा जानेछन् । व्यापारमा तत्काल लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्खनु उचित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानी भने फ’स्टाएर जानेछ । अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछी परिनेछ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।